ကာလဝမ်းရောဂါ သည် ဗိုက်ဘရီယို ကော်လရေး” ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင
ⓘ ကာလဝမ်းရောဂါ သည် ဗိုက်ဘရီယို ကော်လရေး” ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် အူသိမ်ထဲတွင် ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကရောဂါလက္ခဏာများမှာ အရည်များ အလွန်အမင်းပါသ ..
ကာလဝမ်းရောဂါ သည်" ဗိုက်ဘရီယို ကော်လရေး” ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် အူသိမ်ထဲတွင် ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကရောဂါလက္ခဏာများမှာ အရည်များ အလွန်အမင်းပါသော ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့် အန်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကူးစက်ခြင်းမှာ အရင်းခံအားဖြင့် မသန့်ရှင်းသောရေ သို့မဟုတ် အစာကို စားမိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့် အန်ခြင်းတို့ ပြင်းထန်ပါက အလျင်အမြန် ရေဓာတ်ကုန်ခန်းခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အီလက်ထရိုလိုက်များ မညီမမျှ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အခြေခံကုသမှုမှာ ခံတွင်းမှ ရေဓာတ်ပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးသည့် ဖျော်ရည်ဖြင့် ဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ ဤသို့ကုသရုံဖြင့် မရပါက အကြောထဲသို့ ဆေးသွင်းကာ ကုသရသည်။ ပဋိဇီဝဆေးများမှာ ထိုသို့သော ပြင်းထန်သည့် ရောဂါများအတွက် ကောင်းကျိုးရှိပေသည်။ ၂ဝ၁ဝ−ခုနှစ်တွင် ကာလဝမ်းရောဂါသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် လူသန်းပေါင်း ၃-၅ သန်းအပေါ်တွင် ထိခိုက်ကူးစက်ခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ - ၁၃၀,၀၀၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါသည်။ ကာလဝမ်းရောဂါသည် ရောဂါကူးစက် ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော နည်းလမ်းများဖြင့် လေ့လာခဲ့သည့် အစောဆုံးသော ရောဂါများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
1. ရောဂါစတင်ခဲ့သည့် သမိုင်း
ဝမ်းရောဂါကာလဝမ်းရောဂါသည် အရှေ့ဖျားဒေသ၌ ရှေးနှစ်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာကပင် စတင်၍ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ သင်္ကကရိုက်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားချက်များတွင် ထိုရောဂါသည် ခရစ်မပေါ်မီ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂိုအာနယ်မှ ပေါ်တူဂီလူမျိုး ဆေးဆရာဝန်တစ်ဦးက ၁၅၆၃ ခုနှစ်တွင်မှ ထိုရောဂါနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုံလောက်စွာ ဖော်ပြနိုင်ခဲ့လေသည်။ အင်္ဂလန်ပြည်၊ လန်ဒန်မြို့နေ ထင်ရှားသည့် ဆေးဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျွန်စနိုး ခရစ် ၁၈၁၃-၁၈၅၈က ၁၈၄၉ ခုနှစ်တွင် ဝမ်းရောဂါရှိသည့် ရေက ထိုရောဂါကို သယ်ဆောင်သွာသည့်အကြောင်း လက်တွေ့ပြနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၈၈၄ ခုနှစ်တွင်လည်း ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဘာလင်မြို့မှ ရောဗတ် ကိုးခရစ် ၁၈၄၃-၁၉၁ဝက ဝမ်းရောဂါကိုဖြစ်ပေါ်စေသော ဗက်ဆီလပ်ပိုးကို တွေ့ရှိရလေသည်။ ထိုရောဂါကပ်ကြီးသည် ၁၇ နှစ် ၁၈ ရာစုနှစ်များအတွင်း၌ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်းထိုရောဂါသည် အာရှတိုက်ရှိ တိုင်းပြည်များတွင်သာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်။ ၁၈၂၆ ခုနှစ်မှ ၁၈၃၇ ခုနှစ်အထိ နှစ်များအတွင်း၌ ထိုရောဂါသည် ဥရောပတိုက်သို့ စတင်ပြန့်ပွား သွားခဲ့လေသည်။ ၁၈၃၂ ခုနှစ်ခန့်တွင် ထိုရောဂါကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း၌ စတင်တွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း ၁၈၃၅ ၊ ၁၈၃၆၊ ၁၈၄၉၊ ၁၈၅၄၊ ၁၈၇၃ နှင့် ၁၈၈၄ ခုနှစ်များတွင် ထိုရောဂါသည် ကပ်ကြီးဆိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားခဲ့လေသည်။ ၁၈၉၃ ခုနှစ်တွင် ထိုရောဂါကပ်သည် နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့လေသည်။ သို့သော် ၁၈၇၃ ခုနှစ်မှစ၍ အကြီးအကျယ် မဖြစ်ခဲ့တော့ချေ။ ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုတွင် ထိုရောဂါသည် ယခုရာစုနှစ်အတွင်း၌ပင် ပျောက်ကျားဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိသေးသည်။ ရောဂါကပ် အနေမျိုးနှင့်ကား ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရလေသည်။
2. ရောဂါသွင်ပြင်နှင့် လက္ခဏာများ
ကာလဝမ်းရောဂါ၏ အဓိကရောဂါ လက္ခဏာများမှာ နာကျင်ခြင်းမရှိသော အလွန်အမင်း ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့် အရည်ကြည်များ အန်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ဤရောဂါလက္ခဏာများမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးကို မျိုချမိပြီး တစ်ရက်မှ ငါးရက်အကြာတွင် ရုတ်ချည်းဆိုသလို စတတ်ပါသည်။ ဝမ်းလျှောခြင်းကို" ထမင်းရေ” ကဲ့သို့ သဘာဝရှိသည်ဟု ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး၊ ငါးညှီနံ့ကဲ့သို့ ရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးကုသခြင်း မရှိသော ကာလဝမ်းရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသူတစ်ယောက်သည် တစ်နေ့လျှင် ၁၀-၂၀ လီတာပမာဏအထိ ဝမ်းသွားနိုင်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာပြသော လူအယောက် ၁၀၀ တွင် ၃ ယောက်မှာ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရ နိုင်သော်လည်း လက္ခဏာမပြဘဲ ရှိတတ်ပါသည်။
အကယ်၍ ပြင်းထန်သော ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့် အန်ခြင်းတို့ကို တင်းကြပ်စွာ ကုသခြင်းမပြုပါက နာရီအနည်းငယ် အတွင်းမှာပင် အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်သော ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့် အီလက်ထရိုလိုက် မညီမျှခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း၏ ထူးခြားသော ရောဂါလက္ခဏာများတွင် သွေးဖိအား ကျဆင်းခြင်း၊ အရေပြား ပြည့်တင်းမှုညံ့ဖျင်းခြင်း လက်များ တွန့်ရှုံ့ခြင်း၊ မျက်တွင်းဟောက်ပက်ဖြစ်ခြင်းနှင့် သွေးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
3. ဖြစ်ပွားစေနိုင်သော အကြောင်းအရင်းများ
ထုံးစံအားဖြင့်ဆိုလျှင် သာမန်ကျန်းမာသော လူကြီးတစ်ယောက်အား ကာလဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားစေဖို့ ဘက်တီးရီးယားပိုး သန်းပေါင်းတစ်ရာခန့်ကို မျိုချရပေမည်။ သို့ရာတွင် အစာချေသော အက်ဆစ်ရည်နည်းသည့် သူများအတွက်မူ ဤပမာဏထက်နည်းပေသည် ဥပမာအားဖြင့် H+ pump inhibitor များကို အသုံးပြုနေသူများ။ ကလေးသူငယ်များမှာ ထိခိုက်အလွယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး အသက်နှစ်နှစ်မှ လေးနှစ်အရွယ်ကလေးများတွင် ရောဂါကူးစက်မှု အများဆုံးဖြစ်သည်။ သွေးအုပ်စု အို အမျိုးအစား ရှိသူများမှာ အထိခိုက်လွယ်ဆုံးအဖြစ်နှင့် သွေးအုပ်စု အမျိုးအစားသည် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကာလဝမ်းရောဂါကို ထိခိုက်လွယ်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေပါသည်။ လူသားတို့၌ရှိသော ဆစ်စ်တစ် ဖိုင်ဘရိုးစစ်စ် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲခြင်းသည် လက်ရွေးစင် အကျိုးကျေးဇူးကို ထိန်းသိမ်းပေးထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ပြောင်းလဲခြင်းကို သယ်ဆောင်သော ဟက်ထရိုဇိုင်းဂတ်စ်သည် ဆစ်စ်တစ် ဖိုင်ဘရိုးစစ်စ်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိသောကြောင့် ဗီကော်လရေး ကူးစက်ခြင်းများကို ပိုမိုခုခံတွန်းလှန်သည်။ဤပုံစံဖွဲ့စည်းပုံတွင် ဆစ်စ်တစ် ဖိုင်ဘရိုးစစ်စ် ထရန်စ်မဲမ်ဘရန်း သွယ်ပို့သော ထိန်းညှိကိရိယာ လမ်း ကြောင်းများတွင်းရှိ ပရိုတင်းများ၏ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ချို့တဲ့ခြင်းသည် ဘက်တီးရီးယားနှင့် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အပေါ်ယံအလွှာ အက်ပီသယ်လီယမ်တို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းကို တားဆီးနှောင့်ယှက်သည်။ ထို့ကြောင့် ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်း၏ အာနိသင်ကို လျော့နည်းစေသည်။
ကာလဝမ်းရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားသောသူများတွင် မကြာခဏဆိုသလို ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်တတ်ပြီး၊ အရည်များစွာပါသော မစင်ဖြစ်ပါက အရပ်သုံးစကားဖြင့်" ထမင်းရည်”အဖြစ် ရည်ညွှန်းပြောဆိုပါသည်။ ယင်းမစင်သည် အခြားသူများအသုံးပြုသော ရေကိုမသန့်မရှင်းဖြစ်စေပြီး ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ညစ်ညမ်းစေသော အကြောင်းရင်းမှာ ထုံးစံအားဖြင့် ကာလဝမ်းရောဂါ ခံစားနေရသော အခြားသူများဖြစ်ပြီး ယင်းတို့၏ ဆေးကုသမှုမပြုဘဲထားသော မစင်များကို ရေလမ်းကြောင်းများ၊ သို့မဟုတ် မြေအောက်ရေ သို့မဟုတ် သောက်သုံးရေပေးဝေပေးသောနေရာများသို့ ဝင်ရောက်စေသောအခါများတွင် ဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါပိုးကူးစက်နေသော မည်သည့်ရေကိုမဆို သောက်သုံးခြင်းနှင့် ယင်းရေနှင့်ဆေးကြောထားသော မည်သည့် အစားအစာကိုမဆို စားသုံးခြင်း၊ ထို့နည်းတူ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေသော ရေလမ်းကြောင်းများထဲတွင် နေထိုင်သော ယောက်သွား များတို့သည် လူတစ်ယောက်အား ရောဂါပိုးကူးစက်မှု ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။ ကာလဝမ်းရောဂါသည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ အခြားတစ်ဦးထံသို့ တိုက်ရိုက်ကူးစက်ခဲပါသည်။ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေသော အမျိုးအစားနှင့် အဆိပ်အတောက်မဖြစ်သော အမျိုးအစားများ နှစ်ခုလုံး ရှိပါသည်။ အဆိပ်အတောက် မဖြစ်သော အမျိုးအစားများမှာ လိုင်ဆိုဂျင်းနစ်ဗက်တီးရီးယိုဖေ့ဂျ် တစ်ခုမှတဆင့် အဆိပ်အတောက် ရယူနိုင်ပါသည်။ကမ်းရိုးတမ်းဒေသများတွင် ကာလဝမ်းရောဂါ ရုတ်တရက် ဖြစ်ပွားခြင်းများနောက်တွင် ထုံးစံအားဖြင့် ရေညှိများရုတ်ချည်း ပေါက်ပွားလာခြင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကာလဝမ်းရောဂါကို ဇိုဝါနောတစ်ခေါ် လူနှင့် တိရစ္ဆာန်အကြား သဘာဝအခြေနေတွင် အပြန်အလှန်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်စေပါသည်။
သို့သော် ကမ္ဘာရှိ အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်မူ ထိုရောဂါသည် ဆက်၍ဖြစ်ပွားလျက်ပင် ရှိပေသေးသည်။ ၁၉၁၈-၁၉ နှစ်အတွင်း၌ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဝမ်းရောဂါကပ် ဆိုက်ရောက်လာသောအခါ ထိုရောဂါကြောင့် လူပေါင်း ၅ဝဝ,ဝဝဝ ကျော် သေဆုံးကြရလေသည်။ ထိုရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်သည့် သွေးကြည်ရည် သွေးငန်ရည်ကို တွေ့ရှိထားကြပေပြီ။ ထို့ပြင် ဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားနေသော တိုင်းပြည်များသို့ သွားကြရသူများသည် ရောဂါပိုးရှိမည်ဟုထင်ရသော မြေတွင်ပေါက်သည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် အသီးအနှံ အစိမ်းများကို ရှောင်ကြဉ်ကြပြီးလျှင် မမှည့်သေးသော အသီးများကိုလည်း မစားကြလျှင် ထိုရောဂါမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပေသည်။ ထို့ပြင် ရေကိုလည်း မကျိုဘဲ မသောက်ကြရချေ။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဝမ်းရောဂါ ကာကွယ်ရေးဆေးများကို စစ်သားများအား ထိုးပေးခြင်းဖြင့် ထိုရောဂါကို ကာကွယ်ပေးရာ အထူးအောင်မြင်သည်ကို တွေ့ခဲ့ရလေသည်။ ထို့ပြင် အခြားသောက်ဆေးများ၊ အကြောထိုးဆေးများနှင့်လည်း ထိုရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပေသေးသည်။
ပိုးသတ်ခြင်း - ကာလဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားသူများက စွန့်ထုတ်လိုက်သည့် ရောဂါပိုးရှိသည့် မစင်ပါဝင်နေသော ရေဆိုးနှင့် မသန့်ရှင်းသည့် ပစ္စည်းများအားလုံးဥပမာ အဝတ်အစား၊ အိပ်ရာ၊ စသည်ကို နည်းလမ်းကျစွာ စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် စီမံလုပ်ဆောင်ခြင်းမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကာလဝမ်းရောဂါ ဖြစ်ပွားသူလူနာများနှင့် ထိတွေ့ထားသော ပစ္စည်းများအားလုံးကို ဖြစ်နိုင်ပါက ကလိုရင်းချွတ်ဆေးကို အသုံးပြုပြီး ရေနွေးဖြင့်ဆေးကြော လျှော်ဖွတ်ခြင်းဖြင့် ပိုးသတ်သင့်ပါသည်။ ကာလဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားသူ လူနာများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏အဝတ်အစား၊ အိပ်ရာ၊ အစရှိသည်တို့အား ကိုင်တွယ်ထားသော လက်များကို နှံ့စပ်သေချာစွာ ဆေးကြော၍ ကလိုရင်းခပ်ထားသောရေ သို့မဟုတ် သေးငယ်သော ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို သတ်နိုင်သည့် အခြား ထိရောက်သော ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် ရောဂါကူးစက် ပျံ့နှံ့မှုမရှိအောင် လုပ်ရပါမည်။
ရေကိုသန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း - ကာလဝမ်းရောဂါ ဖြစ်ပွားဖွယ်ရာရှိသော မည်သည့်နေရာများ၌မဆို သောက်သုံးခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်း သို့မဟုတ် ချက်ပြုတ်ခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုသော ရေများအားလုံးကို ကျိုချက်ခြင်းအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကလိုရင်းခပ်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ အိုဇုန်းရေစီမံခန့်ခွဲခြင်း ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ချည်ဖြင့် ပိုးသတ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဥပမာ နေရောင်ခြည်သုံး စနစ်ဖြင့် ရေကိုရောဂါကူးစက် ပျံ့နှံ့မှုမရှိအောင်လုပ်ခြင်း ဖြင့်၊ သို့မဟုတ် သေးငယ်သော ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို စစ်ချခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ပိုးသတ်သင့်ပါသည်။ ကူးစက်ခြင်းကို တားဆီးရာတွင် ရေကို ကလိုရင်းခပ်ခြင်းနှင့် ကျိုချက်ခြင်းတို့သည် ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အဝတ်ဖြင့်ရေစစ်ခြင်းသည် အလွန်အခြေခံကျသော အဆင့်မျှသာဖြစ်သော်လည်း သန့်စင်ပြုပြင် ထားခြင်းမရှိသော မြစ်ကန်ချောင်းရေများအပေါ် မှီခိုနေရသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲသော ကျေးရွာများတွင် အသုံးပြုသောအခါ ကာလဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို သိသာစွာ လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။
အရင်းအမြစ်များ - ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကာလဝမ်းရောဂါဆိုင်ရာ ရေညစ်ညမ်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးချက်များကို ရေကိုမည်သို့သန့်ရှင်းအောင် လုပ်ရမည်ဆိုသည့် ကျိုချက်ခြင်း၊ ကလိုရင်းခပ်ခြင်း၊ စသည်ဖြင့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အတူ ညစ်ညမ်းနေသော ရေအရင်းအမြစ်များ အနီးအနားတွင် ကပ်ထားသင့်ပါသည်။
အရည်များ ဖြစ်ပွားမှုအများစုတွင် ကာလဝမ်းရောဂါကို ခံတွင်းမှရေဓာတ်ပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးသည့် ကုထုံး ORT ဖြင့် အောင်မြင်စွာ ကုသနိုင်ပါသည်။ ယင်းမှာ ထိရောက်မှုအမြင့်မားဆုံး၊ အန္တရာယ်အကင်းဆုံးနှင့် လုပ်ကိုင်ရလွယ်ကူပါသည်။ဆန်ကိုအခြေခံသော ဖျော်ရည်များသည် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိသောကြောင့် ဂလူးကို့စ်အခြေခံသော ဖျော်ရည်များထက် ပိုမိုဦးစားပေးပါသည်။သိသာစွာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းရှိသော ပြင်းထန်သည့် ဖြစ်ပွားမှုများတွင် ရေဓာတ်ပြန်လည် ဖြည့်တင်းသည့် အကြောဆေးသွင်းခြင်း လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ရင်းဂျားစ်လက်တိတ်မှာ ဦးစားပေးသော အရည်ဖြစ်ပါသည်။ပမာဏအများအပြားနှင့် ဆက်တိုက်အစားထိုးမှုကို ဝမ်းသွားခြင်း လျော့နည်းကျဆင်း သွားသည်အထိပေးရန် လိုကောင်းလိုအပ်ပါမည်။ပထမ နှစ်နာရီမှ လေးနာရီအတွင်း ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပမာဏ အရည်များကိုဖြည့်တင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါမည်။
ပဋိဇီဝဆေးဖြင့် ကုသခြင်းများသည် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို တစ်ရက်မှ သုံးရက်အထိ အချိန်တိုသွားစေနိုင်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာများ၏ ပြင်းထန်မှုကိုလည်း လျော့ကျစေသည်။သို့သော် လူများသည် ရေဓာတ်ကို လုံလောက်အောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါက ပဋိဇီဝဆေးမသောက်ဘဲ ပျောက်ကင်းနိုင်သည်။ဒေါ့ဇီဆိုက်ကလင်ကို ပထမဆင့်တွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးပြုသော်လည်း အချို့သော ဗီ ကော်လရေးဘက်တီးရီးယား ပိုးအသစ်များ သည် ဆေးကို တန်ပြန်ခုခံသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကာလအတွင်း တန်ပြန်ခုခံခြင်းအတွက် စစ်ဆေးခြင်းသည် သင့်လျော်သော အနာဂတ် ရွေးချယ်စရာများကို တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်သည်။အတည်ပြုပြီး ထိရောက်မှုရှိသည့် အခြားသော ပဋိဇီဝဆေးများတွင် ကိုထရင်မ်မောက်ဇာဇောလ်၊ အီရစ်သရိုမိုင်စင်၊ တက်ထရာဆိုက်ကလင်၊ ကလိုရမ်ဖှန်နိကောလ်၊ နှင့် ဖူရာဇိုလစ်ဒုံးတို့ ပါဝင်သည်။နော်ဖလော့ဇာစင် ကဲ့သို့သော ဖလိုရိုကွင်နိုလုံးစ်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။သို့သော်လည်း တန်ပြန်ခုခံခြင်းရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နေရာအများအပြားတွင် ပဋိဇီဝဆေး တန်ပြန်ခုခံမှုသည် တိုးလာလျက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများစုတွင် တက်ထရာဆိုင်ကလင်း၊ ထရီမီသိုပရင်မ်-ဆာလဖာမီသိုဇာဇောလ်၊ နှင့် အီရစ်သရိုမိုင်စင် ဆေးတို့ကို တန်ပြန်ခုခံသည်။ဆေးဝါးများကို တန်ပြန်ခုခံခြင်း အခြေအနေများကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် လျင်မြန်သော ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ဓာတုပါဝင်မှု စစ်ဆေးနည်းများ ရနိုင်သည်။ဖန်ပြွန်လေ့လာချက်များတွင် ထိရောက်မှုရှိသည့် မိုက်ခရုပ်များကို နှိမ်နင်းသော မျိုးဆက်သစ် အန်တီမိုက်ခရိုဘီယယ်လ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးဖြစ်သည်။
12. ရောဂါဖြစ်ပွား ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်း